Puntland: Halkee ayuu marayaa qabanqaabada loogu jiro xuska 1da August?
Puntland: Halkee ayuu marayaa qabanqaabada xuska 1da August?
GAROWE - Magaalo madaxda Puntland ee Garowe ayaa waxaa si xowli ah uga socda qabanqaabada loogu jiro xuska loo sameynayo maalintii dhidibada loo taagey maamulka Puntland taas oo ku beegan 1 August,2019.
Diyaar garowga luugu jro maamuska loo sameynayo maalintaas ayaa Madaxweynaha Puntland waxaa uu u magacaabey guddi ka kooban gole wasiiro iyo saraakiil ciidan kuwaasoo uu Madax u yahay Wasiirka maaliyada Puntland Xasan Shire Abgaal.
Sida GO fahansan yahay xuska loo sameynayo sanadguuurada 21aad ee ku beegan markii dhidibada loo taagey maamulkaan ayaa ka duwanaan doonta kuwii la qaban jirey Shantii sano ee la soo dhaafey kuwaas oo intooda badan ku koobnaan jirey xaflad habeenkii lagu qabto xarunta Madaxtooyada Puntland.
Dabaaldaga loo sameyn doono maalintaas ayaa warar lagu kasoon yahay u sheegeen GO iney qayb ka ahaan doonaan ciidamada Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo socod ku mari doono bartamaha magaalo madaxda maamulkaan.
Madaxweynaha Puntland ayaa sdioo kale wararku sheegayaan inuu qayb ka yahay diyaarinta barnaamijkaan isagoo maalmihii la soo dhaafey kulamo joogta ah la qaadanyey guddiyada ku howlan qabashada munaasabada loo sameynayo maalintaas.
Maamulka Puntland ayaa mudadii uu jirey waxaa uu ku talaabsatey hurumar kala duwan iyadoo hadana ka gaabiyey inuu hirgaliyo nidaamka dimuqaraadiyada ee Hal qof Hal Cod.
Madaxweyne Siciid Cabdulahi Dani ayaa balan qaadey in nidaamka doorasho ee Hal Cod Hal qof ka shaqeyn doono sidii loo hirgalin lahaa mudada xilka uu hayo.
War Saxaafaded 16.05.2019. 03:22
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa da'yarta ku tartarsiiyey in ay horumarka dalka qayb ka noqdaan.
Farmaajo oo shaaciyey sababta ay DF muddo kororsi ugu diiday Xaaf
Soomaliya 16.05.2019. 01:49
XOG: Wararka la xiriira khilaaf soo kala dhexgaley Madaxweyne Gaas iyo Khayre
Puntland 01.08.2018. 16:37
​Somaliland: Xuska 18 May oo kuwii hore ka duwan
Somaliland 19.04.2016. 23:55